Garacad: banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Deni. – Radio
Banaanbax balaaran oo ay soo abaabuleen dadka deegaanka Garacad ee degmada Jariiban ayaa maanta lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Deni.
Banaanbaxa ayaa intii uu socday waxaa madaxdii mataleysay shacabka degmada Jariiban ee meesha ka hadashay ay weydiisteen madaxweynaha cusub, aqalka baarlamanka in laga shaqeeyo sidii dowlada cusub ee Puntland ay qayb lixaad leh uga qaadan lahayd mashaariicda horumarinta ah ee ka socda degmada Jariiban, gaar ahaan dhismaha socda ee dekadda kaluumaysiga iyo ganacsiga ee Garacad.
Siyaasi Axmed Aadan Dheere oo ka mid ahaa madaxdiika ka qayb gashay banaanbaxa ayaa soo dhaweeyay madaxda cusub ee Puntland, waxaana uu sheegay in uu u rajaynayo in ilaahey u sahlo mas’aaliyadda culus ay u qaadeen shacab weynaha Puntland.
Magaalo xeebeedka Garacad ayaa noqotay meeshii ugu horaysay ee lagu qabto banaanbax taageero loogu muujinayo madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo shalay lagu doortay magaalada Garoowe, waxaana ay kusoo beegmaysaa iyadoo meel wanaagsan ay marayso mashruuca dekadda Garacad oo dhismaheedu socdo.
Codka Nabadda Garacad
Taliska ciidamada Maraykanka ee loosoo gaabiyo Africom ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku ...